Ntutu ntutu, Ndozi ntutu, Ncha ntutu ntutu - Tingxuan
Ntutu ntutu S201
Ntutu ntutu HS-8006
Ntuzi ntutu 579
Ndozi ntutu na ntutu ntutu W3392
Ningbo Tingxuan Ọdụdọ Ngwá Ọrụ Co., Ltd.
Ningbo Tingxuan Ọdụdọ ngwa oru Co., Ltd. akanyam na wholesales ntutu isi na styling ngwaahịa na ngwa na n'ji ahịa, na-ekpori ndụ dị elu n'etiti ndị na-azụ ahịa. Companylọ ọrụ ahụ amalitela mmekọrịta dị ogologo na nke kwenyesiri ike na ọtụtụ ndị na-ere ahịa na ndị nnọchi anya ya. Ningbo Tingxuan Ọdụdọ akụrụngwa factory akanyam ndị ọzọ na-edozi isi na ngwaahịa na ngwa na zuru ezu iche na ezi uche ahịa. Anyị na-etinye oke mkpa na kredit, na-agbaso nkwekọrịta ahụ, na-ekwe nkwa ịdị mma nke ngwaahịa ahụ, wee merie ntụkwasị obi nke ọtụtụ ndị ahịa nwere njirimara nke arụmọrụ dị mma yana ụkpụrụ nke obere uru na ntụgharị ọsọ ọsọ.
Nke a bụ ntuziaka nzọụkwụ site na otu esi eji mgbatị ntutu, ntutu ntutu na ntutu ntutu isi.
Etu esi eji ntutu ntutu isi ma ọ bụrụ na ị na-eji mgbatị ntutu ọdịnala, nke a bụ ihe ị ga-eme. 1. Jidere akụkụ nke ntutu. Mepụta ngalaba nke ntutu iji gbanye ya. Nta-nta nke ngalaba, tighter the curl. T ...
Nchedo nchekwa maka iji ngwa ụlọ
Ojiji • Emetụla ngwa eletrik aka mgbe mmiri dị na ụkwụ ya. • Yiri akpụkpọ ụkwụ rọba ma ọ bụ rọba mgbe ị na-eji ngwa eletrik, ọkachasị ma ị ...
China mara mma ma na-edozi isi ụlọ ọrụ azụlitewo n'ime ụlọ ọrụ metụtara a dịgasị iche iche nke ubi, gụnyere idozi isi, omenala mara mma, ọgwụ mma, mmụta na ọzụzụ, o ...